प्रधानमन्त्रीको झुट पकडियो: जनतालाई यती धेरै झुटो बोलेका रहेछन प्रधानमन्त्रीले
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शनिबार प्राइम टेलिभिजनमा दिएको अन्तर्वार्ताका क्रममा धेरै झुट बोलेको फेला परेको छ । अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्रीले देश र जनतालाई के के ढाँटे भन्ने विषयको खोजी हुन थालेको छ । उनले चार–पाँचवटा तथ्यहीन र भ्रामक कुरा बोलेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा चर्चा हुन थालेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले अन्तर्वार्तामा बेसारले क्यान्सर निको गर्ने बताए । त्यस्तै, उनले देशमा एक दिनमा २३ हजारसम्म परीक्षण गरिएको दाबी पनि गरे । जबकि नेपालमा अहिलेसम्म तीन दिन मात्र १३ हजारभन्दा बढी पिसिआर परीक्षण भएको छ । हुँदै नभएको दैनिक २३–२४ हजार परीक्षण भएको भनेर उनले कसलाई ढाँट्न खोजेका हुन् ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले अन्तर्वार्तामा मरेकाहरुको संख्या सबै कोरोनाको कारणले होइन, अरु कारणले मरेको हो भन्ने दावी गरे। त्यसो भए कति संख्या चाहिँ कोरोनाकै कारण मरेको हो त ? उनले आफ्नो पालामा सडक निर्माण धेरै भएको र कालोपत्रेसमेत बढी भएको भनेर सफेद झुट बोलेका छन् । प्रधानमन्त्रीले पहिले वर्षमा १० किलोमिटर सडक बन्थ्यो भन्दै विगत दुई वर्षमा ३६ सय किलोमिटर सडक बनेको तथ्यांक दिए।
Prevललितपुर झ’डप नियन्त्रणमा खटिएका १८ प्रहरिमा कोरोना संक्रमण: प्रहरी प्रशासनको लापरवाही
Nextरुसले बनाएको कोरोनाको खोपको परिक्षण सकारात्मक: चाँडै खोप आउन सक्ने